Rent, afarao ny fanananao trano ao Dubai - Real estate estate by Dubai
Mivarotra na manofana ny fananana ao Dubai - Emirà Arabo Mitambatra
Mivarotra na mampandefitra ny trano any Dubai (Ho an'ny tompony sy / na tompon-trano)
Na tompona trano na tompon-trano ianao dia tsy misy toerana tsara kokoa hivarotana na fanofana ny tranonao any Dubai fa tsy amin'ny alalanay. Amin'ny maha-iray amin'ireo orinasan-toeram-piofanana 5 ambony ao amin'ny faritra, manome antoka isika fa ny fananana rehetra-na trano fonenana na tsenam-barotra - dia omena be loatra ny mpampiasa vola sy ny mpividy. Noho izany, afaka manantena ny fivarotana maimaim-poana sy tsy misy alahelo na inona na inona ny vanim-potoana.
Mirehareha ihany koa izahay ao amin'ny vohikalan'ny mpampiasa anay, izay ahitana toro-làlana maoderina sy be dia be ary koa fampahalalana mikasika ny fividianana, fivarotana ary fandraisam-bahiny ao amin'ny faritra. Izany dia ahafahantsika manolotra tolotra fanokafana iraisam-pirenena ho an'ny mpanjifa sarobidy avy amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao.
Raha manana ny lisitra voatanisa mba hivarotana sy / na hividy eto ianao, ny zavatra rehetra tokony hataonao dia fenoy ny taratasy eto ambany, manome ny vaovao ilaina, ary mametraka dika mitovy ny fifanekena.
Azonao atao koa ny mandefa mailaka info@providentestate.com na miantso ny mpiasanay: (+ 971) 04-3233609
Ity endrika ity dia ho an'ny tompona trano sy ny tompon-trano ihany, fa tsy ho an'ireo mpikarakara na mpampindram-bola.
Mpanjifa / Contact Information
Anarana feno *
Mifidiana karazana fanananaApartmentVillaCommercialTownhousePenthouseOfficefirenena
Villa / Flat Number *